Enwere ike ịgbanye iPhone iji nyochaa gị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Enwere ike ịgbanye iPhone iji nyochaa gị
Nhapu ọhụrụ nke onye nkwuputa, Edward Snowden, gosiri na ụlọ ọrụ nchekwa Britain GCHQ na-echekwa puku kwuru puku ozi ịntanetị sitere n'aka ndị nta akụkọ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi kacha ukwuu n'ụwa.
Nhapu ọhụrụ nke onye nkwuputa, Edward Snowden, gosiri na ụlọ ọrụ nchekwa Britain GCHQ na-echekwa puku kwuru puku ozi ịntanetị sitere n'aka ndị nta akụkọ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi kacha ukwuu n'ụwa, gụnyere BBC, Guardian, New York Times, Washington Post na ndị ọzọ.
Snowden agaghị eji Apple iPhone. N'agbanyeghị Apple na-ekwu na ọ wepụtara nkà na ụzụ ọhụrụ nke ndị uwe ojii na-enweghị ike imebi ya, otu n'ime ọtụtụ mkpughe nke Snowden gosiri na NSA nwere ike imebi ngwaọrụ ọbụna mgbe agbanyụrụ ha.
Maka Snowden, mkpebi ịzere teknụzụ dị otú ahụ bụ ma nhọrọ onwe onye na nke ọkachamara, Kucherena gwara RIA Novosti na Mọnde.
"Edward anaghị eji iPhone eme ihe, ọ nwere ekwentị dị mfe ... iPhone nwere sọftụwia pụrụ iche nke nwere ike rụọ ọrụ n'onwe ya na-enweghị onye nwe ya pịa bọtịnụ wee kpokọta ozi gbasara ya, nke mere na ọ jụ iji ekwentị dabere na nchekwa nchekwa. "Kucherena kwuru.